Afrika Archive - Gool FM - page 3	twitter
(Trollhättan) 24 Jan 2017 – Xulka Xeego-Barafka Somalia ayaa guuldarro ku bilowday Koobka Adduunka Xeego-Barafka oo maanta ka furmay magaalada Trollhättan ee dalka Sweden.
Xulka Somalia ayaa la ciyaaray xulka Canada oo ka mid ah dalalka aadka looga dambeeyo ciyaaraha Xeego-Barafka, waxaana looga adkaaday 14-0, taasoo markii nisbi ahaan loo eego noqonayso guuldarro loo qaateen ah.
Somalia ayaa kulanka 2-aad isla caawa ku wajahaysa xul kale oo ka mid ah kuwa ugu ad-adag ciyaarahan, waana dalka Czech Republic.
Xulka Somalia metelaya oo saldhiggiisu 
Baba Rahman oo garoomada ka maqnaan doona inta ka harsan xiliciyaareed kan
(London) 24 Jan 2017 Daafaca amaahda uga maqan kooxda Chelsea ee Baba Rahman ayaa la xaqiijiyay inuu garoomada ka maqnaan doono inta ka harsan xiliciyaareed kan.
22 jirkaan ayaa ku dhaawacmay kulan xulkiisa uu kala qaybgalayay koobka qaramada qaarada Afrika ee 2017, wuxuuna dhaawac halis ah ka soo gaaray jilibka bidix.
Sky Sports ayaa daaha ka qaaday in Baba Rahman uu ka maqnaan doono garoomada inta ka harsan xiliciyaareed kan kadib dhaawicii halista ahaa ee ka soo gaaray jilibka.
BREAKING: Chelsea defender Baba Rahman is out 
Xulka Algeria oo doonayey inuu guul uun gaaro si uu rajo uga yeesho u soo bixitaanka wareegga xiga ayaa waxaa labo gool u dhaliyey Islam Slimani, laakiin labo gool oo ay xulka Segenal 
Xulka Somalia ayaa haatan soo gaarey magaalada Trollhättan ee dalka Sweden oo lagu qabanayo Koobka Adduunka Xeego-Barafka, waxayna Somalia ku jirtaa Pool B oo ay 
(Libreville) 23 Jan 2017 – Kulamo ka tirsan Qeybta A ee koobka qarammada Afrika ayaa la ciyaaray iyadoo kulanka qaranka Cameroon uu barbaro la galay xulka marti gelinaya koobka sanadkan ee Gabon.
Xulka Cameroon ayaa barbaro goolal la’aan 0-0 la galay xulka marti gelinaya koobka qaramada Afrika 2017 ee Cameroon.
Dhinaca kale xulka Burkina Faso ayaa 2-0 uga adkaatay dhiggiisa Guinea-Bissau kulan ka tirsan qeybta A ee koobka qaramada Afrika.
Labada gool ee uu ku badiyey xulka Burkina Faso ayaa goolka hore waxaa iska 
AFRIKA: Xulka Ghana oo guul daro dhabarka u saariyay Mali
(Libreville) 21 Jan 2017 Xulka qaranka Ghana oo sanadkaan looga cabsi qabo hanashada koobka qaramada qaarada Afrika ee 2017 ayaa guul daro ku qasbay xulka Mali.
Ghana ayaa kulankii hore ka soo adkaatay xulka qaranka Uganda, caawa ayeeyna markale 1-0 uga adkaadeen xulka qaranka Mali.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si xiiso badan, xulka qaranka Ghana ayaana qabtay hogaanka ciyaarta daqiiqadii 21 ee qaybtii hore, kadib gool uu u dhaliyay weerar yahankooda Asamoah Gyan.
Ghana ayaa kadib samaysay dhawr isku day oo ay goolal kale ku 
Sadio Mane oo seegi kara kulanka Liverpool iyo Chelsea…(Ilaa intuu sii maqnaan karaa??)
(Gabon) 20 Jan 2017. Sadio Mane ayaa ka caawiyay xulkiisa Senegal inay si raaxo leh uga soo gudbaan wareega group-yada ee koobka Qaramada Afrika kaddib guushii ay ka gaareen Zimbabwe.
Aqbaartan ayaa ah mid ay bogaadinayaan Mane iyo xulkiisa inay u soo gudbaan wareega sideed dhammaadka koobka laakiin ma han war qancinaya Jurgen Klopp iyo kooxda Liverpool maadaama uu sii dheeraanayo waqtiga uu kooxda ka maqnaan doono.
Haddii laga adkaado xulka Senegal kulanka soo socda ee wareega sideed dhammaadka ay ciyaari doonaan 
Kulamada caawa la ciyaarayo Koobka Qaramada Afrika iyo saacadaha ay soo galayaan
(Gabon) 20 Jan 2017. Waxaa caawa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan wareega group-yada ee koobka Qaramada Afrika.
Waxaa fiidkii marka ay saacada geeska afrika tilmaameyso 7:00 gegada Stade d’Oyem isku qaban doona xulalka Ivory Coast vs DR Congo, iyadoo ay xusid mudan tahay in xulka xafidanaya koobkan ee Ivory Coast uu bar-baro ku furtay kulankoodii hore.
Morocco vs Togo ayaa iyana caawa 10:00 Habeenimo is qaban doona iyadoo uu xulka Morocco wax dhibic ah wadan kaddib guul daradii uu ku furtay 
(Libreville) 19 Janaayo 2017 – Xulka qaranka Cameroon ayaa guushii ugu horeeyay ee tartanka qaramada Afrika ee ka gaaray dhigooda Guinea-Bissau, kaddib markii ay u sarrifeen gool looga horreeyey, waxaana guushaan ay xulka Cameroon ka caawisay in ay hoggaanka u qabtaan Guruubka A.
Xulka Guinea-Bissau ayaa goolka la horreeyey waxaana 13’daqiiqo uga naxsaday Cameroon xiddiga Piqueti, kulanka ayaana lagu kalanastay 1-0 ay hoggaanka ku haysay Guinea-Bissau.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay xulka Cameroon ayaa goolka barbaraha la 
AFCON 2017: Xulalka Gabon iyo Burkina Faso oo barbarihii labaad galay
(Libreville) 18 Janaayo 2017 – Kulamadii labaad ee wareega Group-yada ayaa caawa la bilaabay iyadoo xulalkii bilaabay ee Gabon iyo Burkina Faso ay barbaro 1-1 ku kala baxeen, kulan ka tirsan qeybta (A) ee Koobka Qarammada Yurub.
Xulka Burkina Faso ayaa goolka la horreeyay, waxaana xulka marti gelinaya koobka qarammada Afrika sanadkan ee Gabon gool uga naxsaday 23’daqiiqo Prejuce Nakoulma, kaddib markii uu dhamaystiray kubbad daba-maryan ahayd, iyadoo si adag loo raacanayo, Gabon ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Xulka Gabon ayaa iska soo 